रंगोली किन बनाउने ? कस्तो बनाउने ? – Khabar Silo
रंगोली किन बनाउने ? कस्तो बनाउने ?
काठमाडौ । तिहारमा हामी आँगनमा रंगोली बनाउँछौ । कतिले यसमा स्वस्तिक चिन्ह बनाउँछन्, कतिले गणेशको आकृति । कसैले अरु कलात्मक रंगोली पनि बनाउँछन् । झिलिमिली पर्वमा रंगोलीले घरको शोभा बढाउँछ । यद्यपि, यसको साइनो घरको सजावटसँग मात्र छैन।
खासमा, कुनै पनि शुभकार्यमा रंगोली बनाइन्छ । यो लोक कला हो । रंगोली धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाको प्रतिक हो । र, आध्यात्मिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अंग पनि । त्यसैले त विभिन्न हवन वा यज्ञमा पनि रंगोली बनाइन्छ । गाउँघरमा आँगन लिपपोत गरेर रंगोली बनाइन्छ । यसले भूमि शुद्धीकरण हुने विश्वास छ ।
रंगोली कस्तो हुनुपर्छ ?
तिहारका लागि रंगोली स्वस्तिक चिन्ह वा गणेशजीको आकृतिमा सजाउन सकिन्छ ।
यसमा साधारण ज्यामितीय आकार हुन्छ, जसमा देवी(देवताको आकृति बनाइन्छ ।
रंगोलीका लागि सिन्दुर वा अन्य थुप्रै रंग प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुख्खा रंगहरुको प्रयोगबाट मात्रै पनि रंगोली बनाउन सकिन्छ ।
रंगोली बनाउनुभन्दा अघिल्लो रात चामललाई भिन्नाभिन्नै रंगमा भिजाउने र रंगिन चामलले रंगोली बनाउन सकिन्छ ।
चामल वा मैदाको पिठोमा थरिथरिका रंग मिसाएर पनि रंगोली तयार गर्न सकिन्छ ।
रंगोलीलाई सयपत्री फूलले सजाउन सकिन्छ । बीच वा कुनामा दियो बाल्न सकिन्छ ।
किन बनाउने ?
रंगोलीको एक नाम अल्पना पनि हो । अल्पना वात्स्यायनको कामसूत्रमा वणिर्त चौसठ्ठी कलामा एक हो । यो अति प्राचीन लोक कला हो । प्राचीनका कालमा विश्वास थियो, घरमा कलात्मक चित्र र आकृति बनाउँदा धन ऐश्वर्यले परिपूर्ण भइन्छ ।
रंगोली धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाको प्रतिक मानिन्छ । यसलाई आध्यात्मिक प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ । अहिले आँगनमा लिपपोत गरेर रंगोली बनाइन्छ । यसले भूमि शुद्धीकरणको भावना एवं समृद्धिको आह्वान गरिएको बुझिन्छ । यसको अर्को सांकेतिक अर्थ हो, शरीर नश्वर छ भन्ने जान्दाजान्दै जीवनलाई रंगीन बनाउनुपर्छ । यो रचनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यमसमेत हो ।
रंगोली दुई प्रकारले बनाइन्छ, सुख्खा वा गिलो । दुवैलाई पहिलो मुक्तहस्तले र दोस्रो विन्दुलाई जोडेर बनाइन्छ ।
काठमाडौं । ‘फुच्ची केटी ! तिमीले के नै गर्न सक्छौ र…?’ साढे २ वर्षअघिसम्म यस्तै भन्नेहरु अहिले बोनिता शर्मालाई ‘बधाई…तिमी यसको लायक थियौ’ भनिरहेका छन। बोनिता छक्क पर्दै आफैंलाई सोधिरहेकी छिन्, ‘यो कसरी सम्भव भयो ?’ बोनिताले जवाफ पाउँछिन्, मिराकल अर्थात चमत्कार भयो । ‘विश्वका प्रभावशाली १०० महिला’ को सूचिमा आफ्नो नाम पर्नुलाई उनी जिन्दगीको […]
तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ भने फेशनसम्बन्धी यी गल्ती गर्नुभएमा महिलालाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्न ।यहाँ हामी तपाईंलाई केटाले गर्ने फेशन मिस्टेकका बारेमा बताउँछौं जसका कारण केटीहरू भाग्छन् । उल्टो क्याप लगाउने केटालाई केटीहरूले मन पराउँदैनन् । गुण्डो जस्तो देखिन्छ उल्टो क्याप लगाउँदा ।दुब्ला केटाहरूले ठूलो कपडा लगाएमा पनि केटीले मन पराउँदैनन् । खासमा दुब्लेहरूले मोटो देखियोस् भनेर […]
काठमाडौँ, यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणका कारण २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन हुन नसकेपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हो । पाठ्यक्रम […]
डिर्भोसको खबर बाहिर आएपछि के भन्छिन् पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी